ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အမျိုးသမီးပိုင်းလော့ရဲ့ဓာတ်ပုံများ အင်စတာဂရမ်ပေါ်မှာ ရေပန်းစား | Buzzy
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အမျိုးသမီးပိုင်းလော့ရဲ့ဓာတ်ပုံများ အင်စတာဂရမ်ပေါ်မှာ ရေပန်းစား
၃၁နှစ် Eser Aksan Erdoganက အမျိုးသမီးပိုင်းလော့တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမသွားဖူးတဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားကလှပတဲ့နေရာတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး အင်စတာဂရမ်တင်ခဲ့တယ်။
၃၁နှဈ Eser Aksan Erdoganက အမြိုးသမီးပိုငျးလော့တဈဦးဖွဈပွီး သူမသှားဖူးတဲ့ ကမ်ဘာအနှံ့အပွားကလှပတဲ့နရောတှကေို ဓာတျပုံရိုကျပွီး အငျစတာဂရမျတငျခဲ့တယျ။
သူမအလုပ်လုပ်တဲ့ Pegasus လေလိုင်းက လေယာဉ်ပေါ်မှာ သူမတစ်ယောက်တည်း ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေနဲ့ အားလပ်ရက်မှာသွားခဲ့တဲ့နေရာတွေရဲ့ အလှတရားကို အားလုံးခံစားနိုင်ရန် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပြီး အင်စတာဂရမ်ပေါ်မှာ သူမတင်ခဲ့ပါတယ်။
သူမအလုပျလုပျတဲ့ Pegasus လလေိုငျးက လယောဉျပျေါမှာ သူမတဈယောကျတညျး ရိုကျထားတဲ့ပုံတှနေဲ့ အားလပျရကျမှာသှားခဲ့တဲ့နရောတှရေဲ့ အလှတရားကို အားလုံးခံစားနိုငျရနျ ဓာတျပုံရိုကျကူးပွီး အငျစတာဂရမျပျေါမှာ သူမတငျခဲ့ပါတယျ။
ကြယ်လုံးပွင့်ဟော်တယ်မှာအပန်းဖြေနေတဲ့ပုံတွေ၊ Mediterranean မှာ ရွက်လွှင့်စီးပုံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်မယ်တွေအားလုံးနဲ့အတူ Saudi Arabia နဲ့ Tanzania မှာ Northern Lights ကိုသွားကြည့်ခဲ့ကြတယ်။စွန့်စားပညာရှင် ပိုင်းလော့တွေလည်း မိန်းကလေးတွေ male-dominated industry ကို လာရောက်ဆက်သွယ်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်မှာ အလုပ်စလုပ်တည်းက Eser ဓာတ်ပုံတွေစရိုက်ခဲ့ပြီး အခု Followers ပေါင်း၂၈၀၀၀ ရှိသွားပါပြီ။
ကွယျလုံးပှငျ့ဟျောတယျမှာအပနျးဖွနေတေဲ့ပုံတှေ၊ Mediterranean မှာ ရှကျလှငျ့စီးပုံတှေ ဖွဈျပါတယျ။ လယောဉျမယျတှအေားလုံးနဲ့အတူ Saudi Arabia နဲ့ Tanzania မှာ Northern Lights ကိုသှားကွညျ့ခဲ့ကွတယျ။စှနျ့စားပညာရှငျ ပိုငျးလော့တှလေညျး မိနျးကလေးတှေ male-dominated industry ကို လာရောကျဆကျသှယျဖို့မြှျောလငျ့နကွေတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့သုံးနှဈမှာ အလုပျစလုပျတညျးက Eser ဓာတျပုံတှစေရိုကျခဲ့ပွီး အခု Followers ပေါငျး၂၈၀၀၀ ရှိသှားပါပွီ။
Seychellesမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ သူမ မင်္ဂလာဆောင်အပါအ၀င် ပိုင်းလော့ခုံမှာထိုင်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံများကိုလည်း မျှဝေပေးခဲ့တယ်။ Eserက နယ်သာလန်မှာမွေးဖွားပြီး Dutch နဲ့Turkish လေလိုင်း Pegasusမှာ အလုပ်လုပ် နေတာပါ။ Turkey မှာ ၈နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီး ဥရောပနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကို Boeing လေယာဉ်၇၃၇ နဲ့ အလည်ခရီးသွားခဲ့တယ်။ သူမအလုပ်ကို ဘယ်လောက်ခုံမင်လဲဆိုတာ သူမဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးသိနိုင်ပါတယ်..အခု အမျိုးသမီးပိုင်းလော့တွေက အားလုံးပေါင်း ၅၀၀၀သာရှိပါသေးတယ်။
Seychellesမှာကငျြးပခဲ့တဲ့ သူမ မင်ျဂလာဆောငျအပါအဝငျ ပိုငျးလော့ခုံမှာထိုငျပွီး ရိုကျထားတဲ့ဓာတျပုံမြားကိုလညျး မြှဝပေေးခဲ့တယျ။ Eserက နယျသာလနျမှာမှေးဖှားပွီး Dutch နဲ့Turkish လလေိုငျး Pegasusမှာ အလုပျလုပျ နတောပါ။ Turkey မှာ ၈နှဈကွာနထေိုငျခဲ့ပွီး ဥရောပနဲ့အရှအေ့လယျပိုငျးကို Boeing လယောဉျရ၃၇ နဲ့ အလညျခရီးသှားခဲ့တယျ။ သူမအလုပျကို ဘယျလောကျခုံမငျလဲဆိုတာ သူမဓာတျပုံတှကွေညျ့ပွီးသိနိုငျပါတယျ..အခု အမြိုးသမီးပိုငျးလော့တှကေ အားလုံးပေါငျး ၅ဝဝဝသာရှိပါသေးတယျ။
Eser နဲ့ သူမအမျိုးသား Volkan ၊ သူလည်းပိုင်းလော့တစ်ယောက်ပါပဲ
Eser နဲ့ သူမအမျိုးသား Volkan က ပိုင်းလော့ချင်းအတူတူဆိုပေမယ့် လေကြောင်းကွဲတယ်.. ကမ္ဘာအနှံ့ခရီးသွားဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့အားလပ်ရက်ချိန်တွေကို အချိန်ဇယားဆွဲ စီစဉ်ကြတယ်။
Eser နဲ့ သူမအမြိုးသား Volkan က ပိုငျးလော့ခငျြးအတူတူဆိုပမေယျ့ လကွေောငျးကှဲတယျ.. ကမ်ဘာအနှံ့ခရီးသှားဖို့အတှကျ သူတို့ရဲ့အားလပျရကျခြိနျတှကေို အခြိနျဇယားဆှဲ စီစဉျကွတယျ။
Eser အတွက်တော့ ကောင်းကင်ပေါ်မှာ အချိန်တွေအများကြီးကုန်ဆုံးရတာ အခြားလူတွေ ဘ၀မှာမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကို သူမမြင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ''အလုပ်ရဲ့အကောင်းဆုံးပိုင်းကတော့ ဘယ်တော့မှမပျင်းရဘူး..အမြဲတမ်း နေကြီးကိုမြင်ရတယ်. မိုးရွာတဲ့နေ့တွေဆို တိမ်တွေပေါ်တက်နေရသလိုပဲ ''
''အပေါ်မှာဆို အလှတရားတွေအကုန်မြင်ရတယ်..ညဘက်တွေမှာ ပေ၄၁၀၀၀လောက် ရောက်သွားလို့ လမထွက်တဲ့နေ့ဆို တစ်ခါတစ်လေ နဂါးငွေ့တန်းတွေမြင်ရတယ်။ '' Scandinavia မှာဆောင်းရာသီဆို Aurora Borealis ကိုမြင်ရတယ်..အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင် အိပ်မွေ့ချလိုက်သလိုပဲ။ ''
Eser အတှကျတော့ ကောငျးကငျပျေါမှာ အခြိနျတှအေမြားကွီးကုနျဆုံးရတာ အခွားလူတှေ ဘဝမှာမမွငျနိုငျတဲ့အရာတှကေို သူမမွငျခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။ ''အလုပျရဲ့အကောငျးဆုံးပိုငျးကတော့ ဘယျတော့မှမပငျြးရဘူး..အမွဲတမျး နကွေီးကိုမွငျရတယျ. မိုးရှာတဲ့နတှေ့ဆေို တိမျတှပေျေါတကျနရေသလိုပဲ ''
''အပျေါမှာဆို အလှတရားတှအေကုနျမွငျရတယျ..ညဘကျတှမှော ပေ၄၁ဝဝဝလောကျ ရောကျသှားလို့ လမထှကျတဲ့နဆေို့ တဈခါတဈလေ နဂါးငှတေ့နျးတှမွေငျရတယျ။ '' Scandinavia မှာဆောငျးရာသီဆို Aurora Borealis ကိုမွငျရတယျ..အဲ့ဒါကိုကွညျ့လိုကျရငျ အိပျမှခေ့လြိုကျသလိုပဲ။ ''
''တကယ်ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါ..ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက် အများကြီးပြင်ဆင်လေ့လာရတယ်.. ဆိုးဝါးတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေနဲ့ ခရီးသွားဖို့တွေ၊ဂျုတီက ၁၄နာရီ (သို့)၁၆နာရီကြာတတ်တယ်။ ရက်တွေကကြာလွန်းလို့ မနက်မိုးလင်းရင် ဘယ်နေရာရောက်နေလဲဆိုတာ တစ်မိနစ်လောက် စဉ်းစားယူရတယ်။မွေးနေ့တွေလည်း လက်လွတ်ခဲ့ရမယ်..အထူးသဖြင့် နှစ်ပတ်လည်နေ့တွေပေ့ါ။ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ဆုံးရှုံးရမယ် ဒါပေမယ့် အရောင်အသွေးစုံပြီး အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အလုပ်နဲ့ ကမ္ဘာပတ်ရတယ်..၀ါဿနာပါရင် ဒီအလုပ်ကိုရွေးချယ်ဖို့ မိန်းကလေးတွေကို ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်..ရင်ထဲကလည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြိုဆိုပါတယ်။
''တကယျခကျခဲတဲ့ အလုပျတဈခုပါ..ဒီလိုဖွဈလာဖို့အတှကျ အမြားကွီးပွငျဆငျလလေ့ာရတယျ.. ဆိုးဝါးတဲ့ရာသီဥတုအခွအေနနေဲ့ ခရီးသှားဖို့တှေ၊ဂြုတီက ၁၄နာရီ (သို့)၁၆နာရီကွာတတျတယျ။ ရကျတှကေကွာလှနျးလို့ မနကျမိုးလငျးရငျ ဘယျနရောရောကျနလေဲဆိုတာ တဈမိနဈလောကျ စဉျးစားယူရတယျ။မှေးနတှေ့လေညျး လကျလှတျခဲ့ရမယျ..အထူးသဖွငျ့ နှဈပတျလညျနတှေ့ပေေ့ါ။ သူငယျခငျြးတှကေိုလညျး ဆုံးရှုံးရမယျ ဒါပမေယျ့ အရောငျအသှေးစုံပွီး အံ့သွစရာကောငျးတဲ့ အလုပျနဲ့ ကမ်ဘာပတျရတယျ..၀ါဿနာပါရငျ ဒီအလုပျကိုရှေးခယျြဖို့ မိနျးကလေးတှကေို ကြှနျမပွောခငျြပါတယျ..ရငျထဲကလညျး လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲကွိုဆိုပါတယျ။